:::: Baaq nabadeed kasoo baxay garoowe ::::
Ku: Maamulada Isimada iyo dadwaynaha labada shacab ee Puntland iyo Somaliland .
Ku: Saxaafadda Caalamiga ah iyo tan maxalliga ah.
Annagoo ah isimada Puntland oo kushirayay magaalada Garoowe 21-24ka bisha November ee sanadka 2004ta waxaan soo jeedinaynaa baaq nabadeed oo ku aaddan xiisadda siyaasadeed iyo tan milatari ee dhextaal maamulada Puntland iyo Somaliland , Aagoo ka duulayna baahida loo qabo xasiloonida ,nabadgalyada iyo darisnimada labada gobol iyo labada dad ee walaalaha ah.
Annagoo tixgalinayna lagama maarmaanimada in laga hortago dhig qubta iyo dagaal waxaan labada maamul iyo labada shacab ugu baaqaynaa:-
In dagaalka lajoojiyo oo uusan dagaal danbe kadhicin gobolada Sool iyo Sanaag.
In ciidamada lagu kala celiyo fariisamadoodii dagaalka kahor.
In labada maamul ay ku dhameeyaan khilaafka ka dhexeeya hab wadahadal nabadeed lagana fogaado wixii keeni kara dagaal , waxaan mar kale idin xasuusinaynaa oraahdii ahayd dagaal wiilbaa ku dhintee wiil kuma dhasho.
Anagoo ah hogaamiye dhaqameedyada Puntland waxaan gogol nabadeed u fidinaynaa hogaamiye dhaqameedyada maamulka Somaliland, waxaanuna diyaar u nahay inaannu utagno haddii aysan imaan Karin Puntland si looga wada hadlo dhibaatada taagan.
Waxaan soo jeedinaynaa maamulka Puntland maxaabiista uu hayo inuu kuwareejiyo hay’adda ICRC , maxaabiista maamulka Somaliland ay hayaanna ay kuwareejiyaan hay’adda ICRC.
Waxaan Eebbe ka rajaynaynaa in la aqbalo baaqan
Wabilaahi Towfiiq .
Waxaa soo tebiyeey SomaliTalk Garoowe
sahrasiglan | sahrosiglan@mail.com